सधैँ चम्किरहेकी झमक – Chitwan Post
सधैँ चम्किरहेकी झमक
एकदिन ‘मानव’ महाकाव्यका रचयिता मोदनाथ प्रश्रितसँग भेट भयो, त्यो पनि एक विशेष कार्यक्रममा । उहाँ सधैँ प्रगतिवादी कोणबाट कलम चलाउने व्यक्तित्वका रुपमा मेरा स्मृतिमा श्रद्धाका साथ आसीन हुनुहुन्थ्यो, विद्यार्थी जीवनबाटै । खासगरी, मेरो कलेज जीवन अर्थात् २०४६ सालतिरबाटै । उहाँसँग भेट्ने हुटहुटी हुँदाहुँदै पनि त्यो अवसर जुरेकै थिएन ।
त्यसो त, कयौँ मान्छेका झैँ मेरा पनि सपना हुनुहुन्छ महाकवि देवकोटा । एकलव्यले झैँ म पनि उहाँलाई नै प्रेरक मान्छु । त्यसो त, म बालकृष्ण समबाट पनि उत्तिकै प्रभावित छु । मुकुन्दशरण उपाध्याय र वसन्त शर्मा जसलाई यी युगका महर्षि भन्दा मासाभर धेरै हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई । जो जीवनको उत्तराद्र्र्धीय वयमा पनि उही जोश र जाँगरका साथ महर्षिवत्रुपमा साधनारत रहिरहेको देखेँ । उहाँहरु पनि कम प्रेरक हुनुहुन्न । मुकुन्दशरण गुरूको दर्शन गर्न पाउँदा धन्य सम्झेको थियो मेरो आत्माले पनि । मेरा जीवनलाई सदा कर्मशील बन्न प्रेरणा दिने गुरू हुनुहुन्थ्यो गिरिधर ढुङ्गाना र तोया कोइराला पनि, जसले मेरो भित्री ज्योति ‘जेजति र जस्तो प्रकाश छर्न सकेको छ’लाई सदाका निम्ति बलि दिनुभयो ।
गुरू वासुदेव त्रिपाठी पनि श्रद्धेय लाग्छ मलाई । उहाँका कृति खोजी खोजी किन्ने र पढ्ने गर्थेँ उत्तरमध्यमा र शास्त्री तहमा छँदै । स्नातकोत्तरमा त उहाँसँग दीक्षित हुन पाइएला नि भन्ने थियो, तर ठ्याक्कै यहीँ आइपुग्दा जागिरको चौघेरामा परिहालेँ । यसैले कहिल्यै कक्षाको मुखै देख्न पाइनँ । परीक्षाको घडी आइपुग्नै लाग्दा कीर्तिपुर टेकेको भोलिपल्ट १० बजेतिर हो कि जस्तो लाग्छ, लक्ष्मी मिश्रले आरआरमा आज ३ बजेबाट वासुदेव त्रिपाठीको क्लास हुँदै छ रे भनेर के सुनाए म तत्काल गाडी चढेर पुगेँ, बाह्रै बजे आरआर क्याम्पसको गेटमा । त्यहीँ प्रतीक्षा गरेँ अर्का सपनाका गुरू त्रिपाठीलाई । पुस्तकमा फोटो त देखेको हुँ, तर चिन्छु चिन्दिनँ भन्ने लागिरहेकै थियो । पौने ३ तिर त ग्वारग्वार्ती कीर्तिपुरकै साथीहरु त्रिपाठीकै क्लास लिन पुगेपछि त म चकित मात्र भइनँ कि परिचित साथी भेट्दा उत्तिकै खुशी पनि भएँ । उहाँ आइपुग्नुभएकै थिएन हामी अघि नै क्लासभरि फैलिसकेका थियौँ । उहाँ निर्धारित समयमै आइपुग्नुभयो र कक्षा आरम्भ गर्नुभयो । म त्यसदिन सपनाका गुरूसँग विपनामा साक्षात्कार भई दीक्षित भइरहेको थिएँ । त्यो दिन सदा पूर्णिमा लागेको दिनझैँ भएर मेरो स्मृतिपटमा अङ्कित छ ।
त्यो भेटमा श्रद्धेय प्रश्रितले बडा स्नेह र आदरसाथ मलाई ‘झमक घिमिरेका कविताहरु’ दिनुभएको थियो, जुन पुस्तकको सम्पादन आफैँले गर्नुभएको रहेछ । यसअतिरिक्त उहाँले अरु पनि कृति प्रदान गर्नुभएको थियो मलाई । त्यो पलमा सामथ्र्य साप्ताहिकको प्रधानसम्पादक भएको नाताले पाएको त्यो सम्मानभन्दा कयौँ गुणा महान् लागिरहेको थियो । त्यसबेला उहाँले हात मिलाउँदै सदा साधनारत रहन प्रेरित गर्नुभएको थियो । त्यो वाणी मेरा कर्णविवरमा अझै पनि प्रतिध्वनित भई ममा जोशजाँगर र ऊर्जा भरिरहेका छन् । यसका निम्ति म सदा कृतज्ञ छु उहाँप्रति ।
श्रद्धेय प्रश्रितले दिनुभएको झमकका कवितासङ्ग्रह पढेपछि मलाई त्यसमा सङ्कलित कविताहरु राम्रा, मार्मिक र उत्कृष्ट पनि लागे । यसपछि मलाई उनको मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल ‘जीवन काँडा कि फूल’ पढ्ने तिर्सना पैदा भयो । त्यसबेला त्यो कृति बजारमा अप्राप्यझैँ थियो । खोज्दै थिएँ फेला पारेँ सुन्दर पुन दाइमार्फत । दाइ त अब धर्तीमा रहनुभएन, मात्र उहाँसँग बिताएका पलहरु अवशेष छन् हामीसामु । आख्यान भनेपछि औधी भुतुक्कै । खासगरी, जगदीश घिमिरेका विशेष प्रशंसक । पठन संस्कृति करिब सुषुप्त रहेको अवस्थामा पनि उहाँ अनुकरणीय पाठक हुनुहुन्थ्यो ।
मैले खोजेको त्यो पुस्तक बडा सरलतापूर्वक दिनुभयो उहाँले । फेला पारेकै दिन पढेँ सबैभन्दा पहिले गोविन्द गुरूको लामो भूमिका । प्रायः अरुले जे सम्भूmन् या भनून् या जे गर्ने गरेका हुन्, म भने पहिले कृति पढ्नुअघि भूमिका भए भूमिका छैन भने पनि आत्मकथन पढ्छु र मात्र मूल कृतिभित्र प्रवेश गर्छु ।
यति पढ्नासाथ ममा मूल कृतिभित्र विचरण गर्ने उत्कण्ठा पैदा भइसकेको थियो । त्यसमा झमकले बिताएका हरेक अकल्पनीय दुःखद भोगाइ र निर्मम पलहरु पढ्दै जाँदा सास नै रोकिएला जस्तो भयो । त्यो क्षण पाठकका रुपमा मैलाई पनि निकै पीडादायी अनुभूत भइरहेको थियो ।
मदनमणि दीक्षितको माधवी धेरैचोटि पढेँ, जतिपटक पढेँ उतिउति धुरूधुरू रोएँ । रूवाउन त मलाई मुलुकबाहिरले पनि धरधरी रूवायो । जतिचोटि पढ्छु र सुनाउँछु उतिपटक नै आँखा नरसाईकन छाड्दैन । राधाले पनि मेरो झन्डै प्राण लिएको थियो । मुग्लानमा कत्तिपटक सास रोकिएला जस्तो भएको थियो । मलाई प्रकाश कोविदको आरतीले पनि निकै रूवाएको थियो, तर तिनलाई पनि यसले माथ गर्ने हुन् कि भन्ने भय पनि सँगै बढिरहेको थियो । हुन त, अरु थुप्रै त्यस्ता आख्यान पढेको छु जसलाई पढ्दै जाँदा छोड्न पनि सक्तिनँ र नरोई पनि सक्तिनँ ।
आज त्यस्तै प्रलयान्त वेदनामा चुर्लुम्म डुबाउने कृति हातमा थियो र म त्यसलाई पढ्दै थिएँ र पढिरहँदा उनको शारीरिक असक्ततालाई लिएर परिवारजनबाट गरिएको उपेक्षापूर्ण व्यवहारले मुटुलाई नै नमीठो गरी निचो¥यो । दसौँ बिच्छीले एकैचोटि डङ्क मारेजस्तै अनुभूति भइरहेथ्यो । अझ उनले जिउनका लागि गरिरहेको प्रयत्न र केही जान्न र सिक्नका लागि गरिरहेको सङ्घर्ष साँच्चै करूणाले भरिएको लाग्न थाल्यो । दर्द र वेदनाले भरिएको उनको त्यो कृति सक्न हम्मेहम्मे परेथ्यो मलाई ।
सायद् मान्छेपिच्छे हेराइ, बुझाइ र ठम्याइका आआप्mनै रीत हुन्छन् क्यारे । अनि व्यक्तिपिच्छे भावना र अन्तरसंवेदना पनि हुँदारहेछन् क्यारे । भित्री संवेदनाको जरैसमेत हल्लाउने सामथ्र्य राख्ने कृति रहेछ यो पनि । जति पढ्दै गएँ उति नै ममा झमकप्रति अतिशय श्रद्धाभाव पैदा भयो । मान्छे जन्मन्छ । इच्छित–अनिच्छित जीवन भोग्छ र एकदिन मर्छ । तर, यही एउटा कृतिले उनलाई अजरअमर बनाइसकेको रहेछ । उनी त कहिल्यै नअस्ताउने घाम अनि कहिल्यै नओइलाने फूल बनिसकेकी रहिछन् ।
मस्तिष्कबाहेकका कुनै अंक नचल्दा पनि हिम्मत, आत्मविश्वास र प्रबल इच्छाशक्तिकै कारण झमकले असम्भवलाई पनि सम्भव तुल्याइदिइन् । हाम्रो समाजको दृष्टि ज्यादै बक्र छ । कलुषित एवम् लोभीपापी पनि छ । कसैको उन्नति भएको देख्नै नसक्ने अनि अरुका भावनाको कदरै गर्न नसक्ने पनि छ । झमक दृष्टिविहीन होमर र हेलेन केलरभन्दा कत्ति कम छैनन् र उनका कृति पनि त्यत्तिकै महान् पनि छन् । कृति पढिसक्ता मैले उनमा कालिदास, देवकोटा, पारिजात, शेली, महादेवी वर्मा, तेन्जिङ, पासाङ ल्हामु र झाँसीकी महारानीको रुप देखेँ । तर, मैले भर्खरै लिएका नाउँहरुभन्दा झमक विशेष स्थितिमा छिन् । उनी शनिराहु र केतुले निलेका सूर्यको दशाभित्र पनि सार्थक जीवन खोज्ने नारी हस्ताक्षर हुन् । उनको यो अदम्य साहस र सफलता सिङ्गो विश्वसमाजका निम्ति चमत्कार हो र एउटा सत्प्रेरणा पनि हो ।
उनले त्यो उतुङ्ग सगरमाथा आरोहण गरिसकेकी छिन्, तर हामी सबलांगहरु विकृत छौँ, विष्टाका कृमिझैँ बनेका छौँ र छौँ बाहिर सग्लो भित्र फत्फती गलेर दुर्गन्धित भएको फर्सीझैँ । बाहिर सुन्दरता त छ, तर भित्र डाहा, ईष्र्या, घृणा र वैमनस्यले भरिएका । अहो ! कस्तो विकृत छ चिन्तन अनि व्यवहार । अरुको कमजोरीमाथि सहानुभूति दिनु त कता हो कता उल्टै आलो घाउमा नुनखोर्सानी छर्कने हाम्रो आदतलाई के भन्ने ? त्यसमा पनि विकलाङ्ग जन्मिएका आप्mनै सन्तानमाथि गरिने उपेक्षापूर्ण व्यवहार कति सह्य र पाच्य होला ? तर जे होस्, विकलाङ्ग पनि सबलाङ्गभन्दा केही कुरामा कम हुन्नन् भन्ने दृष्टान्त बनिन् । सारा दुनियाँका निम्ति प्रेरणाको स्रोत बनिन् । हरेकले संसारमै सुन्दर र प्रतिभाशाली बच्चा जन्मून् भन्ने चाहेका हुन्छन्, तर कथञ्चित् विशेष प्रकृतिका बच्चा पैदा भए पनि तिनलाई अपार वात्सल्य, कुशल अभिभावकत्व र सधैँ हौसला दिनसक्ने हो भने थुप्रै झमक बन्छन् भन्ने सिद्ध गरिदिएकी छन् । उनले असाधारण शिशुका निम्ति सम्मान र प्रेमको वातावरण सृजना गरेकी छन् ।
लाग्छ, देवकोटाको पागल त्यसै जन्मेन । वास्तवमा हामी आपराधीकरणतर्फ उन्मुख छौँ र सन्ततिलाई त्यस्तै दिशातर्फ डो¥याइरहेछौँ । हुन त, आफ्नै मातापिताबाट त हौसला, प्यार र सम्मान नपाएकोमा त्यति गुनासो गरेकी छैनन् झमकले, तर खुलाइदिएकी छन् आँखा संसारको । हरेक विकलांग सबलांगभन्दा कम छैनन्, प्रस्तुत गरेकी छन् नमुना उनले आफैँलाई संसारसामु सगौरव उभ्याएर । मान्छे प्राणले होइन चेतना, भावना र कर्मले बाँच्छ, फगत कर्महीन भएर बाँच्नु जिउँदो लाससरह हुनु हो भन्ने उनको जीवनदर्शन साँचो अर्थमा स्मरणीय लाग्छ मलाई । राष्ट्रिय मान, पदवी र पुरस्कारहरुबाट समेत सम्मानित बनेकी झमकलाई परिवारबाट राजा–महाराजाको चाकडी गर्न सल्लाह र परामर्श दिइयो, तर उनले लेखकीय स्वत्व बेचेर समर्पित बन्न चाहिनन् । उनको अटल एवम् परिपक्व दृष्टिकोण बौद्धिक दरिद्रका निम्ति दरो झापड हो । उनको यो जीवनदर्शनले फोस्रो आडम्बरमा रमाउन चाहने बौद्धिक दासलाई छुँदै छोएन, सायद् कदापि नछोला पनि ।
खास समालोचना त विद्याविशारद डा. गोविन्द भट्टराईले गर्नुभएकै छ । म त्यति विज्ञता भएको व्यक्ति पनि होइन, यसर्थ पनि म कृतिको शल्यक्रिया गर्ने अभिप्रायले पस्दै पसिनँ, कृतिले ममा पारेको प्रभावको मात्र चर्चा गरेँ । यसमा मलाई पूर्वाद्धीय झमक ज्यादै संवेदनशील र पछिल्लीचाहिँ ज्यादा मनोविश्लेष्य हुन् कि भन्ने लाग्यो ।
सँगसँगै म जीवन र जगत्प्रति सकारात्मक बन्न र मान्छेलाई मान्छैकै रुपमा हेर्ने क्षमताको विकास गर्न हरेक मान्छेले प्रस्तुत कृति पढ्नैपर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ । सायद् प्रस्तुत कृति अङ्ग्रेजीमा अनूदित हुनसकेको भए नोबेल पुरस्कारको हकदार हुन्थ्यो । त्यो समयले अहिले नेटो काटिहाल्यो । आशा राख्छु कि अङ्ग्रेजी भाषासाहित्यका विद्वान्हरुको मन त्यसतिर प्रवृत्त होला ।
हिजो देशले जिउँदो देवकोटालाई चिन्नै चाहेन । पारिजातप्रति पनि फुटेको आँखाले हेरेन । वर्तमानमा पनि राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेबाहेक कसैलाई देख्दै नदेखेको परिस्थिति छ तापनि पार्टी, जाति, लिंग र सिद्धान्तका वारहरुलाई छिचोलेर कम्तीमा पनि चिनोस् झमकलाई र उभ्याओस् विश्वसमक्ष । पुगून् चर्चाको शिखरमा र उनी चम्कून् सदाका निम्ति । चिनाऊन् नेपाली भाषासाहित्य, संस्कृति अनि सिंगो देशलाई र मानवतालाई । उनको लेखनलाई अझ उन्नत र विश्वव्यापी तुल्याउन सदा क्रियाशील भइरहने सबै उदार मनहरुलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु म । जसले उनलाई विचार पस्कने वातावरण बनाइदिए, जसले झमक घिमिरे प्रतिष्ठान खोले, जसले उनका कृतिहरु छपाइदिए, अरु थुप्र्रै जीवनमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिए अहिले पनि त्यो यावत् व्यवस्था मिलाइदिइरहेछन् । अझै उत्साह र उत्प्रेरणा प्रदान गरिरहेछन् ।
मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सुरू